Kyrgyzstan: Adin’Antoko Hakàna Fitondràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2018 3:10 GMT
Niteraka adihevitra betsaka, sahoan-dresaka ary fifandirana teny anivon'ireo bilaogera Kyrgyz ireo hetsika politika tao Kyrgyzstan tao anatin'ny herinandro maromaro lasa. Taorian'ny didim-pitondrana navoakan'ny filoha Bakiev nandrava ny parlemanta Kyrgyz ary ny fametraham-pialàn'ny governemanta, dia hatao ny 16 Desambra ny fifidianana parlemantera vaovao, ary manodidina ny dimampolo ireo antoko politika no nirotsaka hifaninana amin'ireo fifidianana ireo.
Mampahafantatra i Edil Baisalov hoe nanao ny zaikabeny faha-8 tao amin'ny “Ballet and opera Theatre” ny Antoko Sosialy Demaokraty tarihan'i Almazbek Atambaev, tamin'ny 10 Novambra 2007, ary nambara tao ny lisitra avy amin'ilay antoko. i Atambaev, praiminisitra mpisolo toerana ao Kyrgyzstan, nanambàra fa hanao izay tratry ny heriny mba hiantohana ny hampangarahara sy tsy hampitanila ny fifidianana parlemantera (AKIpress):
Tao amin'ny setra fifampiresahana AKIpress, nametraka valinteny mahafaly ho an'ilay fanambaràn'i Atambaev i Aibek1961:
Zavatra vaovao amin'ny fomba fanaontsika ny fifidianana malalaka. Raha halalaka sy tsy hitanila tokoa izy io, dia ho resy ny Antoko Sosialy Demaokraty.
Nanao ny zaikabeny ihany koa ilay antoko Ak-Zhol mpomba ny filoha, izay vao iray volana no namoronana azy, ary nanambara ny anaran'ireo mpikambana tafiditra ao anatin'ny lisitry ny antoko ka isan'ireny i Cholpon Baekova, filohan'ny Fitsaràna momba ny Lalàmpanorenana, ny sekreteram-panjakana Adahan Madumarov ary parlemantera dimy teo aloha. Tsy faly ireo bilaogera Kyrgyz nahita ny fivadihan'ilay parlemantera teo aloha, Kabai Karabekov, izay iray tamin'ireo tena mpanohitra matanjaka ny governemanta nandritra ilay fitokonana tamin'ny Aprily nefa ankehitriny niara-dàlana amin'ny Ak-Zhol. Ohatra, i bored milaza hoe:
Henatra ho anao ry Karabekov! Tsy nampoiziko ho izy no hanao toy izany, tena diso fanantenana tanteraka aho.
Raha i Yad kosa indray manana fomba fijery manakaiky kokoa ny zavamisy:
Tsy misy tokony hahagaga. Ho ahy mahagaga kokoa aza ny mahita hoe hafiriana no haharetany hilazàny fa ao anatin'ny fanoherana izy.
Ilay praiminisitra fahiny, Felix Kulov, no filohan'ny Antoko Ar Namys izay tsy mbola namoaka ny lisitra avy aminy, satria mbola nampanao fanadihadiana momba ireo solontenan'ny antoko tamin'ilay zaikabe ny sampandraharaha mpampihatra ny lalàna. Nandritra ny antsafa iray ho an'ny gazety AKIpress, nilaza izy hoe:
Raha sanatria ka hisy ny hosoka faobe mandritra ny fifidianana parlemantera hatao ny 16 Desambra, tsy ho zakantsika ny lohataona 2008 miaraka amin'ny sondrombidin'ireo vokatra fihinana.